Ciidamo ka soo goostay Jubbaland oo isu dhiibay Al-Shabaab - Awdinle Online
Ciidamo ka soo goostay Jubbaland oo isu dhiibay Al-Shabaab
Dagaalamayaasha Al-shabaab ayaa soo bandhigay Askar ay ku sheegeen inay ka soo goosteen Ciidanka Maamulka Jubbaland, kuwaasi oo ku sugnaa Saldhig Ciidan oo ku yaalla duleedka Magaalada Kismaayo.
War qoraal ah oo lagu faafiyay baraha Intenet-ka Al-shabaab ayaa waxaa ay ku sheegeen in 5 Askari oo ka tirsanaa Ciidanka Jubbaland ay isku dhiibeen, iyagoo hubkood watay laguna soo bandhigay deegaan ka tirsan Jubbada Hoose.
Sababta ay Ciidanka u soo goosteen ayay Al-shabaab ku sheegeen inay tahay, kadib markii dhibaatooyin kala kulmeen Ciidamo ka tirsan kuwa Kenya, waa sida ay hadalka u dhigeen.
Ciidamada lasoo Bandhigay ayaa ku sugnaa Saldhig Ciidanka Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Cabdalla Biroole ee duleedka Magaalada Kismaayo, kuwaasi oo kala ahaa
1-Maxamed Cali Bakar
2-Aadan Cismaan Cumar
3-Xuseen Ibraahim Xasan
4-Cusmaan Maxamed Cabdullaahi
Dhinaca kale weli ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Saraakiisha Ciidanka Maamulka Jubbaland oo ay uga hadlayaan Askarta ay shabaab soo Bandhigeen , isla markaana ay ku sheegeen inay kasoo goosteen Maamulka Jubbaland.
Previous articleMadax-Furasho Miyaa La Siiyay Xubnihii Haystay Silvia Romano?
Next articleQalabka Caafimaad oo laga soo dejiyey Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde